Chelsea oo qorsho la yaab leh u diyaarsatay lasoo wareegista C.ronaldo | TOP NEWS
Chelsea oo qorsho la yaab leh u diyaarsatay lasoo wareegista C.ronaldo
By Mohamed Abdulle Hassan on June 18, 2017 No Comment
Maalqabeenka u dhashay dalka Russia ayaa wuxuu isha ku hayaa inuu gacanta kusoo dhigo kabtanka xulka qaranka Portugal, waana tallaabo sahlan oo uu ku ceshanaayo tababaraha kooxdiisa Chelsea Antonio Conte.
Roman Abramovich uma badna inuu lacag rikoorka adduunka ah ku qarash gareeyo saxiixa Ronaldo si uu u keeno Galbeedka London, ugana caawiyo tababare Conte inuu mustaqbalka dheer sii joogo Stamford Bridge isagoo heysta Xiddiga Ugu Wanaagsan Meerahaan.
Warbixintaan oo uu daabacay wargeyska Daily Express ee dalka Ingiriiska ayaa sheegeysa inuu milkiilaha Chelsea isha ku haayo inuu Eden Hazard farta ka saaro Real Madrid oo muddo dheer raadineysay xiddigaan, si uu gacanta ugu soo dhigo Ronaldo.
Roman Abramovich ayaa wuxuu doonayaa inuu Ronaldo kula kulmo dalkiisa Russia halkaasoo uu haatan xiddigaani ku sugan yahay isagoo ka qeybgelaya tartanka FIFA Confederations Cup 2017.
Waxyaabaha uu Abramovich kusoo jiidanaayo Ronaldo oo ay sidoo kale dooneyso kooxdiisii hore ee Manchester United, iyo kooxo ka dhisan Shiinaha iyo USA waxaa ka mid ah nolosha magaalada London.
Si gaar ah wuxuu ugu sheegi doonaa inay nolol fiican iyo waxbarasho wanaagsan London ka heli karaan labada mataannaha ah ee dhowaan u dhashay iyo wiilkiisa curadka ah Cristiano Jnr.
Chelsea oo qorsho la yaab leh u diyaarsatay lasoo wareegista C.ronaldo added by Mohamed Abdulle Hassan on June 18, 2017